Wararka suuqa iyo wararka sheekooyinka ee Calietc.com - Alietc.com
Tababbarka tooska ah ee tooska ah ee Shiinaha
Xarunta Qaranka ee Horumarinta Maareynta Ganacsiga ayaa bilowday abaabulka tababar khadka tooska ah ah oo lagu taageerayo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee Shiinaha iyada oo ay jirto aafada. Iyada oo diiradda la saarayo maamulka dhoofinta, barnaamijka tababarka waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo qaybaha dhaqaalaha ee ku dhacay Shiinaha si ay uga soo kabtaan. Xarunta Qaranka, oo gacan ka heleysa Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah (ITC), ayaa isku dayaysa inay…Read More
Muuqaalka SheTrades - Haweenka Ganacsiga ku jira
Ku dhawaaqida cusub ee Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah (ITC) ee ku saabsan aasaaska SheTrades Outlook waa tallaabo rajo leh oo loo qaaday sinnaanta jinsiga. Aaladda hal abuurka dhijitaalka ah ayaa sahleysa la socoshada horumarka haweenka iyo gabdhaha ee goobaha ganacsiga. Isku dayga lagu doonayo in lagu gaaro Himilada Horumarka Joogtada ah 5, waa hab ay dawladuhu ku xakameeyaan horumarka jinsiga haweenka ee ganacsiga. Dalbashada 83 […]Read More
Waa maxay Tusaalaha Alaabada?
Ma jiraa alaab-qeybiyaha baahi kasta oo ganacsigaagu qabto? Waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad haysato qalab sax ah iyo agab sax ah oo aad heli karto si aad u fuliso dhammaan baahiyaha macaamiishaada. Haddii aadan sameyn, waxaad isku arki kartaa agab tiro badan, oo kuu noqon kara qashin weyn […]Read More
Helitaanka Bixiyeyaasha Naqshadeynta Naasaha
Waxaa jira haween badan oo jeclaan lahaa inay yeeshaan naasaha waaweyn sida qaar ka mid ah dumarka caanka ah. Laakiin ma awoodaan inay helaan naasahaas cusub sababtoo ah naasahooda oo aad u yar. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo aad u kordhin karto cabirka naasahaaga. Haddii aad tahay qof dumar ah oo rabtay […]Read More
Waa maxay Nidaamyada Wax Soo Saarka?
Noocyada kala duwan ee wax soo saarka wax soo saar ayaa jira si loo hubiyo in alaabada la soo saaray. Nidaamyadani dhammaantood waxay ka walaacsan yihiin tayada iyo habka wax soo saarka wax soo saarka. Qaar ka mid ahi waxay ku yaalliin waaxda warshadaha qaarna waxay ku jiraan qaybta adeegga. Wax soosaarka warshadaha Warshadaha waa nooc ka mid ah wax soo saarka oo ku lug leh wax soo saarka […]Read More
Shirkadaha Ka Hortaga Gaaska - Maxay Yihiin Masuuliyadaha Qaybiyaha Gaas?
Waxaa jira dhowr ka mid ah shirkadaha keena gaaska ee dalka, laakiin meeqo ka mid ah ayaad aamini kartaa? Haddii aad ka cabaneysid wax dhibaato ah oo ku saabsan qiimaha ama tayada gaaskaaga, markaa waa waqtiga saxda ah ee laga fiirsanayo waxa gaaska ugu fiican ee alaab-qeybiyahaagu noqon karo. Halka […]Read More
Helitaanka Alaab-bixiye wanaagsan oo loogu talagalay E-buugaagta
Su'aasha ugu horeysa ee ay tahay in la isweydiiyo marka wax laga iibsanayo ilaha internetka, sida buugaagta elektaroonigga ah, yaa ah alaab-qeybiye wanaagsan? Si go'aan wanaagsan looga gaaro iibsiga, waa inaad hubisaa cidda alaab-qeybiyahaagu yahay. Haddii aad tahay shaqsi marka ugu horreysa wax ka iibsada internetka ama haddii aad […]Read More
Bixiyeyaasha Aaladda Yaraynta Sanadka
Qof kastaa waa inuu helaa qalab yareeya buuqa gurigiisa. Adduunkan aan maanta ku nool nahay buuq badan ayaa ka dhasha oo mararka qaar wuu dhego la’aan karaa. Waa xaqiiqo nasiib daro ah in xaddiga waxyeelada ay keentay sawaxanka xad-dhaafka ahi uu hadda aad noogu yaqiinsan yahay. Deegaanka buuq badan ayaa ah […]Read More
Joogtaynta Sida Farta Loogu Yahay Alaab bixiyaha Alaabada Kale ee Deegaanka
Maaddaama aad tahay alaab-qeybiyaha wax-soo-saarka kale ee deegaanka, ganacsigaagu wuxuu hubaal ka walaacsan yahay horumarinta alaab-qeybiyeyaasha cusub ee aagagga kale. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ah shirkad jirta oo ah alaab-bey'adeed u habboon, waa caqli in laga sii fikiro ka hor. Sidan oo kale, waxaad ku hubin kartaa inaad ku helayso heshiisyadii ugu wanaagsanaa ee suurtogalka ahaa ee dhammaan alaabooyinkaaga iyo adeegyadaada. Sida mid ka mid ah […]Read More
Tilmaamaha Suuqgeynta tooska ah ee loogu talagalay Dukaamada Dharka
Helitaanka alaab-qeybiyeyaal kale oo tiro badan waxay lamid tahay furitaanka daasadda dixiriga ah. Adigu mar dambe mas'uul kama tihid xisaabinta iyo howlaha warbixinta dakhliga. Taa baddalkeeda meheraddaadu waa inay ka taxaddartaa cidda ay wax ka iibsanayso. Waxa muhimka ah in la xasuusto ayaa ah in alaab-qeybiyeyaasha hadda jira aysan mar dambe ganacsi kula yeelan doonin. Hay'ada Caafimaadka Aduunka […]Read More